DEVice KIngdoms - Teknolojiyada Dadka Adduunka
Teknolojiyada Dadka Adduunka
DUULKA FILASHAHA (4K UHD) Fiidiyowga 4K
Adduun iyo Dad, dabeecadda, Isha shimbir, Maqaallo. Kaladuwan, Ansixinta, Ansixinta
Palawan waa qayb ka mid ah janno, waa jaziirad ay ku badan yihiin duur -joogta qalaad, tuulooyinka kalluumaysiga ee cajiibka ah iyo Goobta Dhaxalka Adduunka ee UNESCO. U rux xayawaanka halista ku jira Xarunta Duurjoogta ee Kalawit ama sahamin doontii Japan ee ku burburtay Jasiiradda Coron, oo loo tixgeliyo inay tahay meelaha ugu quusitaanka qurxoon.
DUULYADII DHALASHADA (4K UHD) (4K Video Ultra HD)
Adduun iyo Dad, dabeecadda, Isha shimbir, Ansixinta
Maldives, oo si rasmi ah u ah Jamhuuriyadda Maldives, waa gobol yar oo jasiirado ah oo ku yaal Koonfurta Aasiya kuna yaal Badweynta Hindiya. Waxay ku taal koonfur -galbeed Sri Lanka iyo Hindiya, qiyaastii 700 kiiloomitir (430 mi) oo ka timaadda dhul -weynaha Aasiya. Silsilad 26 atol ah ayaa ka soo bilaabmaysa Ihavandhippolhu atoll ee woqooyi ilaa Addu atoll oo koonfurta ah (oo ka gudubta dhulbaraha). Maldives, oo qabsanaya dhulka ...
DUULKA DHULKA SCOTLAND (4K UHD) - Muusigga nasashada ee quruxda dabiiciga ah ee cajiibka ah (4K Ultra HD video)
Adduun iyo Dad, Isha shimbir, Ansixinta, Ansixinta
Scotland, oo ah waddan maamul iyo siyaasad madaxbannaan ka leh Boqortooyada Midowday ee Great Britain iyo Northern Ireland, waa dhul dal leh xuduud siyaasadeed, jidheed iyo juquraafi, dhaqan ama taariikheed oo si cad loo qeexi karo oo loo hagaajin karo, ama u dahsoon (kiiskan, badanaa, oo qayb ka ah Boqortooyada Ingiriiska, oo ah qaab dawladeed ama dawlad uu madaxa dawladdu yahay boqorka, ...
DUULKA KA QAADANAYA ICELAND (4K UHD) - Muusigga nasashada ee Dabeecadda Yaabka leh (4K Video Ultra HD)
Adduun iyo Dad, dabeecadda, Isha shimbir
Iceland waa jasiirad waqooyi oo ku taal Waqooyiga Badweynta Atlantikada oo ay ku nool yihiin 356 iyo baaxad dhan 991 km103 (000 sq mi), taasoo ka dhigaysa dalka ugu dadka yar Yurub.
DUULKA SWEDEN (4K UHD) - muusikada nasashada ee quruxda dabiiciga ah ee cajiibka ah (4K Ultra HD video)
Magaca rasmiga ah ee Iswiidhan waa Boqortooyada Iswiidhan (Iswiidhishku waa waddan ku yaal Waqooyiga Yurub. Waxay xuduud la leedahay Norway galbeed iyo waqooyi, Finlandna waxay ku taal bari .
Mexico 4K - muusikada nasashada iyo fiidiyowyada dabeecadda quruxda badan
Meksiko waxay caan ku tahay xeebaha ciidda cad, dabeecadda cajiibka ah iyo taallooyinkii qadiimiga ahaa ee dhismaha oo ay ka tageen raadadkii waqtiga. Waxaa jira goob qadiimiga ah oo Aztec ah oo ku taal magaalada hore ee ku taal badhtamaha Magaalada Mexico. Soo -booqdeyaashu waxay u bogi karaan shaqooyin qurux badan oo qurux badan sida Teatro Palacio de Bellas Artes, Taallada Kacaanka, Kaniisadda Metropolitan Church.
U DUULA DULMOOYINKA (4K UHD) - Muusigga Nasashada leh Dabeecad Qurux Badan
Adduun iyo Dad, dabeecadda, Ansixinta
Dolomites, oo sidoo kale loo yaqaan Dolomites, Dolomites ama Dolomites, waa buuro kala duwan oo ku yaal waqooyi-bari Talyaaniga. Waxay ka kooban yihiin qaybo ka mid ah Alps-ka Nuuradda Liimiga Koonfurta waxayna ka kala baxaan Webiga Adige ee galbeedka illaa Dooxada Pieve di Cadore ee bariga. Xuduudaha waqooyiga iyo koonfurta waxaa lagu qeexay Dooxada Puster iyo Dooxada Sugana (Talyaani: Valsugana). Dolomites-ku waxay ku yaalliin ...
DUULA DALKA Denmark (4K UHD) - muusig dabacsan oo leh qurux dabiici ah oo qurux badan (4K Ultra HD video)
Danmark, si rasmi ah Boqortooyada Danmark, waa wadan woqooyiga ku yaal Waqooyiga Yurub. Danmark lafteeda, oo ah tan ugu koonfureed wadamada Scandinavian-ka, waxay ka kooban tahay Jasiiradda Jutland iyo jasiirado ka kooban 443 jasiiradood oo la magacaabay, kuwa ugu waaweynna ay yihiin Zeeland, Funen iyo jasiiradda Waqooyiga Yuulland. Jasiiradaha waxaa lagu gartaa dhul beereed siman iyo xeebo ciid ah, joog hooseeya iyo cimilo dhexdhexaad ah. Danmark waxay ku taal ...
AUSTRIA ee 8K ULTRA HD - Ku safraan meelaha ugu fiican Austria adoo leh nasteexo 8K TV ah
Austria waa wadan yar. In kasta oo aysan lahayn tiro intaas le'eg iyo waxyaabo soo jiidasho leh, sida, tusaale ahaan, Talyaaniga ama Griiga, Austria waxay leedahay quruxdeeda. Laakiin waxaad had iyo jeer sameyn kartaa liistada 10ka soojiidashada ugu fiican Austrian ee aan la iska indha tiri karin marka aad u safreyso Austria. Aan aragno waxa ay yihiin marka la eego tirada booqdayaasha: Schönbrunn Palace: waxay ku taal madaxa dalxiiska ...
XOOLAHA XOOLAHA 8K ULTRA HD • Duurjoogta cajiibka ah iyo dabeecadda ayaa dhawaaqeysa 8K TV
Adduun iyo Dad, dabeecadda
Fiidiyowgan 8K Ultra HD, waxaan ku tusineynaa bey'adeena, oo hoy u ah noocyo badan oo nool, xayawaan, waana noolaha kaladuwan ee sida tooska ah gacan uga geysta joogtaynta nolosha meeraha. Noole kasta door muhiim ah ayuu ku leeyahay meeraheenna. Si tartiib tartiib ah u luminta kala duwanaanshaha noolaha iyo xayawaanku waa ka muhiimsan yihiin sida aan qiyaasi karno maaddaama ugu dambeyn ay horseedi doonto ...
Midabada Badweynta 8K ULTRA HD - 8K Xayawaanka Badaha ee Ugu Fiican ee Nasashada & Muusigga Music
MIDOOBYADA BIYAHA waa filim qurux badan oo raaxo leh oo 8K filim ah oo ku saabsan nolosha badda iyo xayawaanka badda. Fiidiyowgaan, waxaan ku daawan karnaa xayawaannada badda ee adduunka oo idil, oo leh midabbo iyo qaabab qurxoon oo hurdo nasasho ama nasasho leh. Waxaa lagu qiyaasaa in boqolkiiba 70 iyo 80 nolosha dunida oo dhan ay ku hoos jirto badda dusheeda, badahana waxaa ku jira 99 ...
Nasashada ayaa wanaagsan. Iyo nasashada xad dhaafka ah xitaa way kafiican tahay ... iyo madadaalo badan 😎
Meelaha quruxda badan ee meeraha laga helo indhaha shimbirta 🚁📷 16
Shimbiraha qalaad 🌴🦜
Waxaan dooneynaa inaan la wadaagno qof walba sida aan adduunka ugu aragno 8K. Peru 8K HDR waxay baareysaa dadka iyo muuqaalka Peru. Duubistaan ​​waxaa lagu sameeyay qaabkeedii hore.
Shimbiraha Ugu Cajiibka Badan Dunida 8K ULTRA HD - Muusikada & Dabeecadda Dabacsan 8K TV
Shimbiraha waxay ka tirsan yihiin kooxda laf dhabarta waana noocyo leh baalal inta badan u oggolaada inay duulaan, in kasta oo ay jiraan shimbiro aan duul lahayn. Guud ahaan, shimbiraha ayaa duula, booda, socda ama dabaasha xawaare aan caadi aheyn iyo….
U DUULA FARSAMADA (4K UHD) - Muusig dabacsan iyo dabiicad qurux badan - 4K UltraHD video
Faransiisku wuxuu ku yaal Galbeedka Yurub, Faransiiska quruxda badan wuxuu caan ku yahay caasimada ugu jacaylka badan Paris ee adduunka, iyo sidoo kale dhismayaal dhismeed caan ah oo fara badan iyo meelaha loo dalxiis tago ee dalka oo dhan. Kaalay Faransiiska booqashada Faransiiska si aad u booqato magaalada quruxda badan ee Rome, u bogo dooxada quruxda badan ee Morienne, ... Socdaalka Faransiiska ayaa had iyo jeer ah xulasho weyn oo loogu talagalay dadka safarka ah ee jecel ...
Cumaan Cajiib ah oo ku jirta 4K UHD - Goobaha ugu quruxda badan ee dabiiciga ah ee dal carbeed oo qalaad
Ku raaxayso aragtiyaha cajiibka ah ee soo jiidashada dabiiciga ee ugu quruxda badan Cumaan! Muusigga dejinta, muusikada qarsoodiga ah ee la socda daawashada ayaa u fiican nasashada, fikirka iyo yareynta buufiska. Waxaan rajeyneynaa inaan kugu qancino meelaha soojiidashada leh sida: The Wadi Ghul (03:10), (44:20) Wadi Shabakada cajiibka ah iyo Al Fanal Village (08:31) Biyaha quruxda badan ee buluug-cagaarka ah ee magaalada qadiimiga ah Qalhat (06:22), (01:46:20) Mucjiso dabeecadeed - ceel karst ...
Costa Rica 4K - Muusig dabacsan iyo fiidiyowyo dabiici ah oo qurux badan
Costa Rica waa wadan yar oo kuyaala Bartamaha Ameerika, caasimadiisuna tahay San Jose. In kasta oo ay yar tahay, Costa Rica Costa Rica (Isbaanishka Costa Rica (Isbaanishku wali waa mid ka mid ah waddammadu waa dhul leh xuduudo siyaasadeed, muuqaal, juquraafi, dhaqan ama taariikheed, oo labadaba si cad loo qeexi karo loona xallin karo, oo laga xumaado) kiiskan, badiyaa waa dhul leh siyaasad, juquraafi ahaan, dhaqan ahaan ama ...
DUULA DUBAI (4K UHD) - Muusikada nasashada iyo fiidiyowyada dabiiciga ah ee quruxda badan - 4K Ultra video
Adduun iyo Dad
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah toddobada imaaradood, dowlad Islaami ah oo uu xukumo Amiirka Imaaraatka Carabta (UAE) marka la soo gaabiyo, Dubai waxaa adduunka looga yaqaanaa in ka badan dhismaheeda quruxda badan, daaraha dhaadheer iyo xarumo ganacsi oo firfircoon. , quruxda hudheel 7-xiddig leh ... laakiin sidoo kale rafcaannada Suuqyada Dahabka ah, magaaladii hore waa magaalo ballaadhan oo dadka deggen ay mashquul ku yihiin ...
Adduun iyo Dad, Maqaallo. Kaladuwan
Без рубрики, Adduun iyo Dad, Maqaallo. Kaladuwan, Ansixinta
Adduun iyo Dad, Maqaallo. Kaladuwan, Ansixinta
Waa kuwee taangiyadahan qashin-qubka iyo maxay yihiin
Haddii aad ku hawlanayd dhisitaanka gurigaaga, markaa si kastaba ha ahaatee waxaad ka fikirtay hirgelinta dhismayaasha farsamooyinka bulaacada, mugga, qorshaynta ama nidaamka dhismaha toosan oo leh dhul, dhulka hoostiisa iyo (ama) qayb dhulka hoostiisa ah, oo ka kooban culeys -saaridda, iyo xaaladaha qaarkood, oo ku xeeran dhismayaasha dhismaha iyo iyo shabakad beebbooyin si meesha looga saaro biyaha wasakhda ah ee Wabiga ka soo qulqulaya Webiga qulqulaya - dhaqaaqa ...
Cuntada Talyaaniga: caadooyinka, suxuunta caanka ah ee ay tahay inaad isku daydo
In kasta oo magaca rasmiga ah ee Talyaanigu yahay Jamhuuriyadda Talyaaniga (Talyaanigu wuxuu isu taagay inuu yahay dawlad keliya oo kaliya qarnigii XNUMXaad, cunnada Talyaanigu waxay soo bilaabatay qarnigii XNUMXaad ee BC. Tanna, waad aragtaa, waxay u muuqataa mid cajiib ah. Cuntada Talyaaniga. xirfadahooda cunto karinta, oo ay kujirto adeegsiga kaliya maaddooyinka tayada sare leh, cusub, ugu wanaagsan ee laga heli karo agagaarka dhow, ...
Goobta adeegga: qabashada macaamilka ee taabashada koowaad
Без рубрики, Si loo caawiyo maamulaha, Adduun iyo Dad, Weydiimaha caanka ah ee Yandex iyo Google, Maqaallo. Kaladuwan
Shirkadaha aan iibin badeecadaha, laakiin adeegyo siiya muwaadiniinta iyo ururada koox dad ah oo hawlahooda si ula kac ah iskugu dubbariday si ay u gaaraan yoolal guud laakiin dukaamada online -ka ah kuma habboona iyaga - ma ganacsanayaan. Mararka qaarkood xitaa uma baahnid bogag badan. Waxaa ka sii muhiimsan waa cad ...
Klops: Koenigsberg, basasha, snellklops
Adduun iyo Dad, Maqaallo. Kaladuwan, Ansixinta, Ansixinta
Kaliningrad waa magaalo cajiib ah, degsiimooyin waaweyn, eray loo adeegsado weedho dhinacyo kala duwan oo ka mid ah waxqabadyada aadanaha, kuwaas oo ah, dadka deggan oo, sida caadiga ah, aan ku hawlan beeraha, taas oo ilaa 1946 ahayd unug aan nidaamsanayn cabbiraadda, taas oo taariikh ahaan dhaqammada badankeedu ula jeeday hal wareeg oo xilliyada isbeddelka ah (gu'ga, xagaaga, dayrta, jiilaalka) waxay ahayd Königsberg Prussian waxayna qayb ka ahayd ...
Bolse. Ruush iyo Jarmal: yaa guulaysta?
Xaggee buu ka yimid gobolka qowmiyadaha ballaaran ee Bariga Yurub, magaca taariikhiga ah ee dhulalka Slavic -ka Bariiska, sausage ka yimid Ruushka? Sidee sausages Jarmal iyo Ruush ay ugu wada noolaadeen Ruushka ama Xiriirka Ruushka (RF), oo ah dowlad ku taal Bariga Yurub iyo Waqooyiga Aasiya? Sausage noocee ah ayay awoowayaasheen cuneen iyo intee ku kacday bolse? Waxaan kugu casuumeynaa inaad la hadasho ... Sausage wuxuu muddo dheer qayb muhiim ah ka ahaa cuntadeena. Qof…
Tantra Yoga: Shanta Awoodda Eebbe ee Shakti
Yoga waa fikrad dhaqanka Hindida, macne ballaaran, taasoo la micno ah set oo ah dhaqano kala duwan oo xagga ruuxa, maskaxda iyo jirka ah oo laga soo saaray jihooyinka kala duwan ee Hinduuga iyo Budhiismka oo loogu tala galay socodka - set oo ah dhaqano ruuxi ah, maskaxeed iyo jireed oo kala duwan oo laga soo saaray jihooyin kala duwan eray aan mugdi ku jirin oo macnaheedu noqon karo: Jihada vector -ka ...
1 2 3 ... 5 Horay u soco
Ku dar maqaal diiwaangelin la'aan
Waxaan ku jirnaa instagram
Categories Select category Без рубрики Si loo caawiyo maamulaha Adduun iyo Dad Weydiimaha caanka ah ee Yandex iyo Google dabeecadda Dhirta markii ugu horreysay lagu sharraxay buugga Noocyada Noocyada 'Plantarum' Isha shimbir Guriga lagu sameeyo Maqaallo. Kaladuwan Bogagga qiimaha alifbeetada Taxa xoolaha oo loogu magac daray aadanaha Taxa cayayaanka oo loogu magac daray aadanaha Dhirta taxa oo loogu magac daray aadanaha Dhirta Aasiya Dhirta Waqooyiga Ameerika Cudurka Australia Cudurka Shiinaha Cudurka Waqooyiga Ameerika Endemics ee Koonfurta Ameerika Cudurka Jaban Ansixinta Ansixinta
Ku dar boostada diiwaangelinta:
Asturnaanta iyo Kukiyada Qaanuunka: Boggan wuxuu adeegsadaa cookies. Markaad sii wadato adeegsiga degelkan, waad oggolaatay isticmaalkooda.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah, oo ay ku jiraan maareynta cookies, halkan: Siyaasadda cookies
KHAYRADA KIISA © 2021
Mawduuca ka yimid	Cayaaraha WP
Faallo soo dheji ...
Magaca (waa loo baahan yahay)